ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ပျဉ်းမကန် ကျေးရွာအနီး ဂျပန်အမျိုးသမီးသေဆုံးမှု့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ပျဉ်းမကန် ကျေးရွာအနီး ဂျပန်အမျိုးသမီးသေဆုံးမှု့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး
ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ပျဉ်းမကန် ကျေးရွာအနီး ဂျပန်အမျိုးသမီးသေဆုံးမှု့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး
Posted by shwebagan on Oct 1, 2011 in History | 25 comments
ဒီမနက်မြင်းခြံသားတစ်ယောက်က ပြောသွားပါတယ်။ ခုလိုဖြစ်ရပ်အတွက် တစ်တိုင်းပြည်လုံးစိတ်မကောင်း
ဖြစ်ကြတာအမှန်ပါပဲ။ ကာယကံရှင်ကျောက်ပန်းတောင်းသားတွေကပိုပြီးခံစားရတာပေါ့။ ဒီလိုမျိုးပြစ်မှု့ကို
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေလုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး ။ကျောက်ပန်းတောင်းသားတွေကလည်းမြို့ နာ တယ်
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာလို့လူစုကွဲသွားတယ်လို့သိရပါတယ် ။ကျောက်ပန်းတောင်းလူငယ်များသတ္တိကိုလေးစားပါတယ် ။ြ မန်မာတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုဂျပန်ပြည်သူတွေနဲ့ ကမ္ဘာကိုသိအောင်ဒီသတင်းလေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Student of Buddhavantha
View all posts by shwebagan →
သေတဲသူကတောသေသွားပြီးပေါ စိတ်တောမကောင်းပါဘူး ဒီကောင်းလေက ဘာလိုချင်းတာလဲ ကာမဆန္ဒာလား ပစ္စည်းလား ~ ~ လူအသက်သေအောင်လုပ်တာကတော့ မည်သူမျှမကြိုက်ပါဘူး
ဂျပန်လူမျိုးတယောက်အတွက်တော့ ၄င်း၂ခုစလုံး အတွက်အပြောကောင်းရင်ရနိုင်ပါလျက်ဘာကြောင့်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးဖေါ်ရွေတဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ကမ္ဘာမှာမျက်နှာမပြရဲ့အောင်လုပ်လိုက်တာများလားဗျာ ။ ရိုင်းစိုင်းလိုက်ကြတာ ။ သေဒဏ်ပေးပစ်သင့်တာ ။
တဏှာလောဘ ကြောင့် မှားခဲ့ပေမယ့်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ အခုမှ စပြီး စည်ကားလာစေဖို့ မူဝါဒတွေ ချမှတ်ပြီး ကြိုးစားနေချိန်မှာ ဒီလို ဖြစ်တော့ မလာရဲ ဖြစ်သွားမှာတောင် စိတ်ပူမိတယ်။
တော်ကြာ ပုပ္ပါးတောင်တို့၊ ပုဂံတို့ဖက်တွေ ဧည့်သည်နည်းမလားမသိဘူး
ငါးခုံးမတကောင်ကြောင့် တလှေလုံးပုပ် ဆိုတာ ဒါမျိုးပေ့ါ။ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့သားတွေတင်မကဘူး နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးပါ သိက္ခာကျတယ်။
Whatashameless case!
ဘာလို့.. တရားခံလို့စွတ်စွဲခံရသူရဲ့အိမ်ကိုမီးရှို့ ဖို့လုပ်ရတာလည်း..။
ဒီလိုလုပ်တာဟာ.. ပိုပြိးအရှက်ဖြစ်စေမှာပေါ့..။ ဥပဒေအစိုးမရပဲ.. ဗရမ်းဗတာဖြစ်နေတာလို့.. ပေါ်လွင်နေမှာပေါ့…။
တရားခံ(စွတ်စွဲခံရသူ)ကို.. အဲဒီနယ်ခံတွေကပဲ ၀ိုင်းဖမ်းပေးပြီး ရဲလက်အပ်တယ်လို့.. သတင်းအရဆိုတာပဲ..။
– နယ်ခံတွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုဝိုင်းဖမ်းပြီး ရဲလက်အပ်ပေးခဲ့တာကို.. သတင်းတွေမှာများများဖေါ်ပြသင့်တယ်..။
– နယ်ခံတွေက.. သေဆုံးသူရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုဆီ ၀မ်းနည်းကြောင်း ပန်းခွေဖြစ်ဖြစ် ပို့သင့်တယ်.။
– တရားခံ(စွတ်စွဲခံရသူ)ကိုယ်တိုင်က..သူ တကယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်.. လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တောင်းပန်သင့်တယ်..။
ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက်..(ယဉ်ကျေးမှုအရ) သေတယ်ဆိုတာ.. သိက္ခာနဲ့ယှဉ်ထိုးရင်.. မဆန်းဘူးထင်မိပါတယ်..။
ဒါကြောင့်. တရားမျှတ..ဂုဏ်ရှိတဲ့သေခြင်းဖြစ်အောင်.. ကျန်ရစ်သူတွေလုပ်ပေးဖို့က.. တော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့.. ထင်မိပါတယ်..။
“တရားခံ(စွတ်စွဲခံရသူ)ကို.. အဲဒီနယ်ခံတွေကပဲ ၀ိုင်းဖမ်းပေးပြီး ရဲလက်အပ်တယ်လို့.. သတင်းအရဆိုတာပဲ..။
အမေရိကန် သူတယောက် ရေးလာ သော စာပါ။။။
so difficult to understand such terror one could inflict upon another human being. I am very sorry for the situation and the sadness that the family must be feeling.
It is true that bad things can happen to good people and yes we must take precautions. I work asanurse in an Emergency Department ofahospital in the USA (near SF) and see violence onaall too frequent basis.I am glad in Burmaacitizen can arrestaperson…this really does not seem possible in the US. I am curious how this works and what is said to make this possible. I can only imagine your religion helps to make it possible in your country.
I will be coming to Burma (not alone) in Feb of next year.
လွဲမှားသော သတ္တိ အဖြစ် ခံစား ရပါတယ်။
တရားဥပဒေနဲ့အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူသင့်ပါတယ်။ ဆိုးတယ်ဆိုပြီး စောက်မြင်ကပ်ပုဒ်မနဲ့ တော့ မသင်းသတ်သင့်ပါ။ဘာပုဒ်မတွေနဲ့ ညိတယ်ဆိုတာ သေချာစွာစဉ်းစားပြီး ဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာ အရေးယူသင့်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုးတာ သတင်းစာမှာပါဓါက်ပုံဖော်ပြပေးသင့်ပါတယ်။ မုဒိန်းမှု ၊ လူသတ်မှု၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းအား နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှု၊ နိုင်ငံတော်သိက္ခာချမှု၊ တွေနဲ့ စွဲချက်တင်သင့်ပါတယ်။ ဆိုးတဲ့လူအတွက် မှန်ကန်တဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ပေးမှုရှိမှသာ ဥပဒေကို လေးစာလိုက်နာလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကြားရတာအင်မတန်ကို ဆိုးဝါးတဲ့ သတင်းပါ။ကျွန်မတို့ မြန်မာလူုမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေက ဒီလောက်တောင် အောက်တန်းကျနေပြီလားလို့ မေးရင်တောင် ခေါင်းငုံ့ခံနေရမဲ့အဖြစ်မျိုးပါဘဲ။ ဒီလူလည်း မလွယ်လောက်ပါဖူး။ နိုင်ငံခြားအမျိုးသမီးကို မပြောနဲ့ ကိုယ့်မြန်မာအမျိုးသမီးကိုတောင် ဒီလိုမလုပ်သင့် မပြုမူသင့်ပါဘူး။ သူ့အတွက် ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ပေးမှုကိုတော့ ပြုလုပ်ပေးရမှာဘဲ။ သူတို့နိုင်ငံတွေကလည်း စီရင်မှုကို စောင့်ကြည့်နေမှာပါ။ အပြစ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာမှာ မှားသွားရင်တော့ ထပ်ပြီးဂုဏ်သိကာကျစရာတွေဖြစ်လာမှာပါဘဲ။
ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ဖတ်ရတဲ့ သတင်းတစ်ခုအရ ဆိုင်ကယ်သမားက အရင်ဆုံး အမျိုးသမီးရဲ့ အပေါ်ပိုင်းကိုကိုင်တယ် ၊ နောက်ဆက်ကျူးလွန်ဘို့ ကြိုးစားတယ် အမျိုးသမီးက အော်လို့ သတ်တဲ့ အခြေအနေထိဖြစ်ရတယ်..
ဖြစ်နိုင်တာက အမျိုးသမီးနဲ့ နဲနဲပါးပါး အဆင်ပြေတဲ့ အနေအထားရှိပါမယ် ၊ နောက်အခင်းထဲကို ဆိုင်ကယ်သမားက ခေါ်သွားမယ် ၊ (ကျွန်တော်ကြားဖူးတဲ့) ဂျပန်မတွေရဲ့ အနေအထားအရ အခင်းထဲလို အနေအထားမှာ ဒီ ကိစ္စမျိုး လုံးဝ လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ဟိုတယ်မှာ ဆို အဆင်ပြေနိုင်တာမျိုးပါ ၊ ဂျပန်မ က
မကြိုက်တော့ ပြန်ပြောမယ် စကားက မပေါက် မွှန်က မွှန်နေတော့ ဒီလိုအဆင့်ထိ ဖြစ်သွားတာလို့ ထင်ပါတယ်
သူ့အတွက် ခဏလေးပေါ်လာတဲ့ စိတ်ရိုင်းတစ်ခု အတွက် သူကိုယ်တိုင် ပေးဆပ်ရမှာက ကြီးသလို ၊ သူ့မိသားစု ဘာအပြစ်မှ မရှိပဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခေါင်းမဖော်ရဲအောင် ဖြစ်သွားရပါပြီ၊ မိန်းမပျိုတွေပါရင် ပြောင်းပြေးချင်လောက်တဲ့ အခြေအနေတောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်
ဘာမှမဆိုင်ဘူး ဆိုတာတောင် မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ မနေ့က ရှော့ပင်းစင်တာ တစ်ခုမှာ ဂျပန်လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ မျက်နှာပူ အားနာမိသေးတယ်
ဖြစ်ပြီးသွားတာကတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူး၊ နောက်ထပ်ဒါမျိုး အမှားတွေ ထပ် မမှားဘို့တော့ လိုပါတယ်
“ဂျပန်မ ကမကြိုက်တော့ ပြန်ပြောမယ် စကားက မပေါက် မွှန်က မွှန်နေတော့ ”
နိုင်ငံခြား သူတွေ စရိုက်အနေအထိုင် ကိုသဘော ပေါက်ဖို့လိုတယ် ။ အထင်အမြင်မလွဲမှားစေဖို့ ။
၁) နိုင်ငံခြား သူတွေ တယောက်ထဲ ခရီးထွက်တတ် တယ် ။ 自助旅行 ( Budget travelling ) ခေါ်တယ် ။ ငွေကုန်သက်သာ တယ် ။ လွတ်လပ်တယ် ။ အချိန် ကိုကိုယ်လိုသလို အသုံးချနိုင်တယ် ။ တယောက်ထဲ က အဖော်နဲ့ အချိန်ညိ စရာ မလို ဘူးလေ ။ အလုပ်ပိတ် ရက်တိုက် ဆိုင် မဆိုင်တို့ပေါ့ ။
၂) နိုင်ငံခြား သူတွေ ဝတ်စားတာ ကိုကြည့်ပြီး ဖိတ်ခေါ်တယ် မထင်ပါနဲ့ ။ ဒါသူတို့ ဝတ်နေ ကျ ။ မြန်မာပြည် ရောက်တော့ ပိုအိုက် တယ် လေ ။
၃) နိုင်ငံခြား သူတွေ မြင်မြင်ချင်း တရင်းတနှီး နဲ့ဆက်ဆံ လို့ ငါ့ကို သူကျနေ ပြီလို့ မထင်ပါ နဲ့ ။
ိဒါဒီ siteပေါ်က ရွာသူ/သား တွေ ထင်ဟတ်ထား တဲ့အချက် အလက်တွေ ပါ ။
ဒီအ ချက်တွေ နဲ့ အမျိုးသမီး တယောက် ကို ကြံတယ် ဆိုရင် တော့ ဒီလူ ရိုးလွန်းတယ် လို့ပဲ ပြောရမယ် ။ တခြား အချက်ရှိ လား တော့ မပြောတတ်ဖူး ပေါ့လေ ။
ပြောရရင်.. ယူအက်စ်ကမြန်မာအမျိုးသမီးတွေလည်း.. တယောက်ထဲ..တခြားနိုင်ငံအလယ်/အလုပ်နဲ့.. သွားနေကြပါတယ်..။ အာဖရိကတောရွာတွေမှာ.. ဆေးသွားကုပေးနေတာတွေတောင်ရှိပါတယ်..။
အင်းတော်တော် ကိုအရှက်ရမဲ. လုပ်ရက်ပဲ မြန်မာကတော. ဟိုတလောကလည်း ဘောလုံး ကြောင်.နံမည်ပျက်
တရားခံဟာ စိတ်ကြွဆေးသုံးထားတယ်လို. ပြောပါတယ်။ဘာကြောင်.ပဲဆိုဆိုရှက်စရာအလွန်ကောင်းပါတယ်။
သားသားပြောရင်လည်း သူများစိတ်ဆိုးတာကိုကြည့်ပြီး သားသားက ရီရဦးမယ်
ဥပဒေတိုင်း တိတိကျကျလုပ်ဘို့လိုမယ်လို့ ပြောလိုက်ရင်ပြီးနေဘီဘဲဟာ
ပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေရော ဘာတွေရော ဖြစ်နေကြတော့
ရဲစခန်းမှာရေးထားသလို တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ပြလိုက်ပေါ့
ကိလေသာ ညှို့အားတွေက တယ်လဲ ပြင်းထန်သွားတယ်နဲ့တူပါတယ်နော် ..
bluerose ရေ တောထွက်ရင် အနော့လဲ ခေါ်နော် ..
လောကကြီးရဲ့ ဘယ်လိုဒေသ၊ ဘယ်လိုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ မဆို ဒီလို တဒင်္ဂကိုပဲ ကြည့်တတ်တဲ့၊ လူမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် အတွက် ၊ မြန်မာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် မကောင်းသလို ကျောက်ပန်းတောင်းဒေသ အတွက် လည်း နာမည်မကောင်းတာတော့ အမှန်ပါ။
နောင်မဖြစ်ရလေအောင် စံပြ အရေးယူပြဖို့နဲ့ နောက်ကာလမှာ ထပ်မဖြစ်အောင် ထိမ်းသိမ်းနိုင်ကြဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကို ပြပြီး မြန်မာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာ ဒေသခံတွေကို အသိပညာပေးဖို့လည်း လုပ်စေချင်တယ်။